Sanduuqa Hantida Tamarta ee Cusub I
Qaadashada fursado fara badan oo lagu rakibayo kaabayaasha tamarta nadiifka ah ee wadanka Mareykanka, New Energy Capital waxay dhistaa nadiifin, koronto dheeraad ah oo korontada ku shaqaysa waxayna bixisaa maalgalin faa'iido leh.
$ 7.5 milyan oo lagu galo sanduuqa deynta; $ 2.5 milyan oo loogu talagalay wada-maalgalinta maxaliga ah, haddii ay khusayso; laga soo bilaabo sannadka 2016
Iyadoo diirada la saarayo mashaariic yar iyo mid dhexdhexaad ah iyo shirkado, lacagta New Energy Capital (NEC) ayaa waxaa lagu taageeraa hantida dhabta ah ee keenaysa socodka dag dag ah. Shirkadda guulaheeda waxay si toos ah ujirtaa ujeedooyinka McKnight's Barnaamijka Cilmi-baarista iyo Cimilada ee Midwest in la dhiso nadiifin, korriin, iyo dhaqaale ahaan caafimaad oo caafimaad qabta kaas oo yaraynaya qiiqa aqalka dhirta lagu koriyo.
Soo Celinta Dhaqaale: Soo celinta ugu horreysa waa kuwo wanaagsan. NEC waxay u fidineysaa caasimad si loo horumariyo tamarta dib u cusboonaysiinta si deg deg ah oo waxtar leh waxayna awoodday in dib loo rogo qaar ka mid ah caasimadeena.
Saameynta Bulshada & Deegaanka: Sanduuqan wuxuu hirgelinayaa saamaynta deegaanka ee xoogan iyadoo la taageerayo horumarinta ugu yaraan 1,500 megawatt oo ah mashruuc tamareed nadiif ah iyada oo loo marayo sagaal maalgashi oo leh toddobo shirkadood.
Miisaaniyaadka maalgalinta maalgalinta waxay ogolaanayaan iskutalaabista iskutallaabta u dhexeeya maalgashiga aasaasiga ah iyo hawlaha deeq bixinta. Shaqaalaha cimiladu waxay soo aruuriyeen maamulayaasha New Energy Capital, khabiiro siyaasadeed oo qorraxda deegaanka ah, iyo u doodayaal. NEC waxay wax badan ka bartay jawiga la cusbooneeysiin karo ee gobolka Minnesota halka hoggaamiyeyaasha aan faa'iido doonka ahayn ay ka maqleen maal-galiye maal-galiye qaran oo arkaya fursado maal-galin oo soo jiidasho leh gobolada kale.
Dhawaan dhowaan, laba shirkadood oo ka soo qaada lacag ka socota NEC waxay ka shaqeeyaan Minnesota. Tani waa calaamad muujinaysa in ay jirto cillad aan sharci ahayn oo ku saabsan jardiinooyinka qorraxda marka loo eego markii aan asal maalgelino.